कतारमा जोखिममा रहेका नेपालीलाई लिन आउ सरकार ! – Khabarhouse
कतारमा जोखिममा रहेका नेपालीलाई लिन आउ सरकार !
Khabar house | १४ बैशाख २०७७, आईतवार ०६:०८ | Comments
सुवास शर्मा, चापागाईं/कतार । केही समय अघिसम्म लाग्थ्यो, सब ठिक भइहाल्छ नि । हिजो आज हेर्छु, धेरै कुराहरु बेठिक हुँदैछ । कतारमा मात्र होइन, खाडीका अरु देशहरुमा को;रोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढि रहेको छ । सडकमा गाडी चल्दैनन् । कम्पनीमा काम बन्द छ । नेपाल जाने जहाज हाम्रा लागि आकाशमा उड्दैनन् । न नेपालले नै हामीलाई लिन जहाज पठाउँछ ।
कल्पना गर्दा पनि अत्यास लाग्छ । म मात्र होइन, अहिले धेरै जना आत्तिनुभएको छ । यो अवस्थामा यहाँ बस्न त पटक्कै मन छैन । तर सधैं मनको कहाँ चल्दो रहेछ र ? यो अवस्था त कसैको पनि नचल्ने आएको छ । सोच्दा धेरै गाह्रो छ । नसोच्दा केही पनि छैन भनेझैं पो भएको छ । सबैलाई नहोला, तर यहाँ हुने धेरै नेपालीलाई को;रोना सङ्क्रमण हुन्छ जस्तो लाग्छ बेला बेलामा त।
ल ठिक छ नेपालले एकै पटक सबैलाई लैजान परेन । तर जो जोखिममा छन्, जो बिरामी छन्, जसलाई तत्काल लैजान पर्छ, तिनीहरुलाई छुट्याएर लैजाँदा त हुन्छ नि । जस्तै सुगरका रोगी, प्रेसरका रोगी, दैनिक औषधि खानुपर्ने लगायतका जसलाई सङ्क्रमण देखिएको छैन, उनीहरुलाई त लैजाँदा हुन्छ नि । उनीहरुलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
नेपाली दूतावासले पनि यो कुरालाई बुझेर त्यही अनुसार समन्वय गर्दा कति राम्रो हुने थियो। लगेर क्वारेण्टीनमा राखोस् ।बरु राख्न, खाना खुवाउन सकिंदैन भने न्यूनतम पैसा तोकेर नेपाल सरकारले विदेशबाट गएका कामदारबाट दिनगन्ती रुपमा पैसा लिंंदापनि हुन्छ
नियम नमान्नेलाई कडा कारबाही होस् । यहाँ धेरै नेपालीहरु सङ्क्रमित हुनुभएको छ । तर कतार सरकारले भनेको छैन । हाम्रो पालो कहिले हो थाहा छैन। सरकारले बेलैमा कुनै निर्णय नगर्ने हो भने त हामी जति निरीह को होला र ? त्यसैले म भन्छु, म ठिक छु, तर जोखिममा रहेका नेपालीलाई लिन आउ सरकार ।